Isinki yentsimbi engatyiwa, iSinki yaseKitchen, iBafu yokuhlambela -NODMA
Isinki yentsimbi engatyiwayo
Iwasha yeNdebe yeSinki
Isinki ePhezulu yeglasi
Isinki yesitya esiphindwe kabini
Sink yesitya esinye
I-NODMA - uvulindlela kwinqanaba eliphezulu
ikhitshi isinki ishishini
umenzi wehlabathi weesinki zasekhitshini zentsimbi engenasici
THENGA NGOKU UMBUZO NGOKU
Imbasa yoYilo oluTshayo
Iintsuku zokuLungiselela iisampuli
I-NODMA inoluhlu olubanzi lweemodeli, ezibandakanya iisinki zensimbi ezingenasici, iifaucets, izitya zokuhlambela zentsimbi, kunye nezixhobo ezahlukeneyo zorhwebo.Uyilo lwenoveli lweemveliso lunokukunceda ukuba ubambe ngcono isabelo semakethi kwaye uphucule ukunamathela kwabathengi.
IiSinki zeNtsimbi eNgatyiwayo
I-NODMA isinki yentsimbi engenastainless steel isetyenziswa kakhulu kwiihotele, kwiindawo zokutyela, kwiibhari nakumaziko oluntu.Ayintle nje kuphela kodwa ikwacoceka lula iisinki zentsimbi engatyiwayo ezinomgangatho obalaseleyo.Nazi iisinki ezintathu eziphezulu zentsimbi engenasici ezenziwe yi-NODMA kwireferensi yakho:
ISinki Eyenziwe Ngezandla Encinci EneSiva seNdebe ye-NQ466
ISink Eyenziwe Ngezandla Eyobunewunewu SUS304 Isono Sentsimbi EngenaStainless...
Ibala leSinki leSinki eliMnyama leNano eliMnyama...
SUS304 iRectangular Double Bowl Kitchen Sink Wit...
Multi-function Top entabeni Kitchen Sink MT948B
Iimveliso zeBathroom yentsimbi engenaStainless
Izitya zensimbi ezingenasici kunye ne-niches zihambelana nokusingqongileyo kwaye zihlala zihlala njalo.Ukongeza, imibala eyahlukeneyo kunye neenkcukacha zobungakanani zinokudibana neendlela ezahlukeneyo zokuhombisa ikhaya.
Isitya sokuhlambela sentsimbi esingenasici
I-Niche yensimbi engenaStainless
Nceda usishiye kwaye siyakuqhagamshelana phakathi kweeyure ezingama-24.
UMvelisi oKhokelayo weKhitshi kunye neeMveliso zeBathroom
I-NODMA yingcali yensimbi engenasici yomenzi ophezulu kunye nomthengisi e-China oneminyaka engaphezu kwama-20 yamava.
I-NODMA ngumvelisi obanzi, okhokela ishishini ekwenzeni ikhitshi kunye neemveliso zokuhlambela.
I-NODMA izimisele ukusombulula zonke iintlobo zeengxaki ekufakeni nasekusebenziseni ukubonelela ngamava angcono kubathengi.
FUNDA UPHUME IBALI
Izinto zeNtsimbi eNgatyiwayo ezikumgangatho ophezulu
I-NODMA ivelisa nje i-POSCO yensimbi engenasici, eyi-100% enokuphinda isetyenziswe kwaye ihambelana nokusingqongileyo.Izinto ezingaphakathi ekrwada zizisa indibaniselwano efanelekileyo phakathi kobuhle kunye nokusebenza kunye nokukhuselwa kwendalo kunye noyilo lwangoku.
Uyakwazi uku-odola iisinki zesiko ngokweemfuno zakho.Nabathengi kufuneka basixelele imarike ekujoliswe kuyo, kwaye siya kukwenzela imveliso ngokweempawu zentengiso yakho.Sikwanazo neemveliso zoyilo ezintsha nezikhethekileyo zokukunceda ukuba ubambe ingqalelo yabathengi bakho ngokukhawuleza kwaye ngaloo ndlela ubambe imakethi.
Iintsuku ezi-3 zokuhanjiswa kweSampuli
Iqela lethu lemveliso lineminyaka engaphezu kweshumi yamava kwiisampuli zokuvelisa.Iintsuku ezintathu zokukhokela iisampulu ezenziwe ngesandla zikuvumela ukuba ufumane isampuli yakho, uqinisekise umgangatho, kwaye uvavanye imarike ngokukhawuleza.
Uluhlu olubanzi lweeMveliso kunye neZincedisi
Uthotho lweemveliso zeNODMA lubandakanya iisinki zasekhitshini, iifaucets, izitya zokuhlambela, kunye nezixhobo.Iisinki zinesitya esinye sesitya, iisinki ezimbini zesitya, isitya esisodwa sesitya kunye nebhodi yokukhupha, isitya esiphindwe kabini sesitya kunye nebhodi yokukhupha, kunye neesinki ezisebenzayo-uluhlu olubanzi lweemveliso ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.Ukongeza, ukuqina kweesinki ukuhlangabezana namava emveliso yokugqibela yomthengi.
Yintoni imathiriyeli yeemveliso zakho?
Izinto eziphathekayo yi-SUS 304 yentsimbi engatyiwayo.
Singenza njani ukuze siwazi umgangatho ngaphambi kokubeka iodolo?
Iisampulu zinikezelwe kwiimvavanyo zomgangatho.
Sinokuwuqinisekisa njani umgangatho?
Sinesampulu yokuvelisa kwangaphambili ngaphambi kokuveliswa kobuninzi.Sinokuhlolwa okupheleleyo phambi kokuthunyelwa;
Yintoni umahluko phakathi kwe-undermount kunye ne-topmount sinki?
Iisinki eziphantsi kweentaba zifakwe phantsi kwe-countertop.I-drop-in okanye i-topmount sinks ifakwe phezu kwe-countertop.
Yiyiphi imigaqo yentlawulo?
Ngesiqhelo TT, okanye enye njengesicelo sakho.
Fumana iisampuli SIMAHLA Namhlanje
Singathanda ukuva kuwe !Sithumele umyalezo usebenzisa ifom echaseneyo , okanye usithumelele i-imeyile .Siyakuthanda ukuva kuwe!Sithumele umyalezo usebenzisa le fomu ingezantsi
UThintelwa Njani umhlwa kwiiSinki zeNtsimbi eNgatyiwayo
Yeyiphi igeyiji yesinki yentsimbi egqwesileyo?
Umnxeba weNkonzo: +86 13925333418
Idilesi: Itekhnoloji yasekhaya yaseNodma, i-110-1 Gaoping Avenue, idolophu yaseSanjiao, isiXeko saseZhongshan, kwiPhondo laseGuangdong
© Copyright 2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.>